उlमेर पुlगेकाले मात्रै हेlर्नुहोला यी मlहिलाको यस्तो हlर्कत – Kantipur Np
उlमेर पुlगेकाले मात्रै हेlर्नुहोला यी मlहिलाको यस्तो हlर्कत
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २२, २०७७ समय: १९:४८:०९
आजभोली अफिस जान भने पछि हुरुक्कै हुन्छु। कहिले पुगुँ र त्यो रिसेप्सनको कुर्सीमा गएर थच्च बसुँ जस्तो लाग्छ। मानौं अचेल त्यो रिसेप्सनको कुर्सीमा आधुनिक चुम्बक छ ! अनि पो त्यसले मलाइ तानी रहन्छ। नत्र किन म अफिस भने पछि मरिहत्ते गरेर दौडन्छु त ? जति काम गरे पनि तलब भत्ता जस्ताको तस्तै !
तर पनि म भित्र भने अचेल अचम्मको जाँगर खुबै चलेर आँउछ।”
पहिले त अफिस भने पछि वाक्कदिक्क लाग्थ्यो। कहिले छुट्टी लिउँ ! कहिले बिदा पर्ला ! कहिले शनिबार आउला र आनन्दले बसुँला जस्तो लाग्थ्यो तर अचेल त शनिबार नै नआए नि हुन्थियो , कुनै दिन पनि बिदा नपरे हुन्थियो, हरेक दिन अफिस खुलोस र हरेक समय त्यो रिसेप्सनको कुर्सी नछोडु जस्तो !
लाग्छ हरेक समय त्यही कुर्सीमा बसिरहुँ-बसिरहुँ त्यो कुर्सीमा बसे पछि कहिले रात नपरोस र कहिले अफिस बन्द नहोस।”
अचेल घरमा पनि आमाले खाना बनाउनु हुन्न। म आफै बनाउँछु किनकी 5-10 मिनेट भए पनि छिटो गरूँ र अफिस पुगुँ अनि त्यो रिसेप्सनको कुर्सीमा थचक्क बसेर आनन्दको श्वास फेरुँ। आमा पनि अचेल मेरो जाँगर र परिबर्तन देखेर चकित हुनु भएको हुनु पर्छ किन कि पहिले-पहिले केही काम नगरी अफिस जाने मान्छे !
तर अहिले आमाले त भान्साको काम केही छुनै नपर्ने भएको छ।”
अचेल म चाँडो अफिस आउन थालेको मीरालाई पटक्कै मन परेको छैन। 1-2 पटक त उनले मलाई सम्झाई पनि सकिन्। तर मेरो आफ्नै कुरा ***भिडियो हेर्न यहाँ लिन्क क्लिक गर्नुहोस***”
Last Updated on: April 4th, 2021 at 7:48 pm